Gen 15 | Shona | STEP | Shure kwaizvozvo shoko raJe­hovha rakasvika kuna Abhuramu pane zvaakaratidzwa, richiti, "Usatya Abhuramu; ini ndiri nhovo yako nomu­bayiro wako mukuru-kuru."
Jehovha anoita sungano naAbhuramu
1 Shure kwaizvozvo shoko raJe­hovha rakasvika kuna Abhuramu pane zvaakaratidzwa, richiti, "Usatya Abhuramu; ini ndiri nhovo yako nomu­bayiro wako mukuru-kuru."
2Abhuramu akati, "Ishe Jehovha, muchandipeiko, zvondofa hangu ndisina mwana; uchava mudyi wenhaka yeimba yangu ndiEriezeri weDhamasiko kanhi?" 3Abhuramu akati, "Tarirai, hamuna ku­ndipa mwana; zvino uyo wakaponerwa mumba mangu ndiye achava mudyi we­nhaka yangu."
4Ipapo shoko raJehovha rakasvika kwaari rikati, "Uyu haangavi mudyi we­nhaka yako; asi uyo, achabuda paura hwako, ndiye achava mudyi wenhaka yako." 5Akamubudisa panze akati, "Zvino tarira kudenga, uverenge nyere­dzi, kana uchigona kudziverenga." Akati kwaari, "Ndizvo zvichaita vana vako."
6Iye akatenda Jehovha, akamuti ndiko kururama kwake.
7Akati kwaari, "Ndini Jehovha wa­kakubudisa panyika yeUri yavaKaradhea, kuti ndikupe nyika iyi, ive nhaka yako."
8Iye akati, "Ishe Jehovha, ndichaziva seiko kuti ichava nhaka yangu?"
9Akati kwaari, "Nditorere tsiru rina makore matatu, nesheche yembudzi ina makore matatu, nehondohwe rina makore matatu, nenjiva, nemwana wenjiva." 10Akandomutorera izvozvo zvose, aka­zvipamura napakati, akagadzika rumwe rutivi rwakatarisana norumwe; asi shiri haana kudzipamura. 11Ipapo magora aka­burukira kunyama, asi Abhuramu wakaa­dzinga.
12Zvino zuva rakati rovira, Abhu­ramu ndokubatwa nehope huru; akawi­rwa nokutya kwakabva parima guru. 13Akati kuna Abhuramu, "Uzive kwazvo kuti vana vako vachava vatorwa munyika isati iri yavo, vachava varanda vavo, vachatambudzwa makore ana mazana mana; 14asi ini ndichatonga rudzi urwo rwavachashumira, pashure vachabudapo nefuma zhinji. 15Asi iwe uchaenda kuna madzibaba ako norugare; uchavigwa wa­kwegura kwazvo. 16Rudzi rwechina ru­chadzokera pano, nokuti kusarurama kwavaAmori kuchigere kuzara."
17Zvino zuva rakati ravira, kwa­sviba, choto chinopfungaira nezhenje romoto zvakaonekwa zvichipfuura napakati penhindi idzodzo dzenyama. 18Nomusi iwoyo Jehovha akaita sungano naAbhu­ramu, akati, "Vana vako ndavapa nyika iyi, kubva parwizi rweIjipiti kusvikira kurwizi rukuru, runonzi Yufuratesi. 19VaKeni, navaKenizi, navaKadhimoni, 20navaHeti, navaPerezi, navaRefaimi, 21navaAmori, navaKenani, navaGiriga­shi, navaJebhusi."